University iyo tacliinta sare | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Codsashada jaamacadda leedahay in la sameeyo bilo badan ka hor maalinta ugu horeysa. Waa in aad go'aan ka gaarto waxa nooca dugsiga aad rabto in aad u tagtaa oo soo ururin iyo soo gudbiyaan warqadaha waqtiga Akhri wax dheeraad ah
deeq A waa lacag aad codsan kartaa haddii aad u baahan tahay caawimo bixinta college deeqay. Baro deeq waxbarasho oo si gaar ah waxaa loogu talagalay dadka cusub Akhri wax dheeraad ah
College waxay noqon kartaa mid aad u qaali ah ee America. Dad badan ayaa aad u codsato lacag ugu deeqday deeq waxbarasho loo yaqaan ama dowladda gargaarka. Qaar kale waxay sidoo kale ay doortaan in ay u shaqeeyaan waqti-dhiman Akhri wax dheeraad ah
Haddii aad rabto in aad dugsiga bilowdo ee dalka Mareykanka, waxaad u baahan doontaa si ay u muujiyaan waxa ay waxbarashada aad heshay wadankaada hooyo. Loo-shaqeeyayaasha weydiin kartaa oo ku saabsan waxbarashada, aad. Waxaad u baahan doontaa qoraalladii aad shisheeye qiimeeyo. Laakiin xataa haddii aad leedahay degree ama shahaado wadankaada hooyo, laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay qaataan fasallo dheeraad ah ama baadhitaano si uu shuqulka aad shaqadaadii hore. Akhri wax dheeraad ah
Ma rabtaa in aad ku dhameysan waxbarashadaada? Tabobaro shaqo cusub ama aad u hagaajisid xirfadaha? Tag jaamacad ama bartaan Ingiriisi? Ogow sida aad waxbarashada dadka waaweyn ah ka heli kartaa internetka ama bulshadaada. Akhri wax dheeraad ah
Diraya ilmo off kulliyadda
Diraya ilmo off kulliyadda waa mid aad u xiiso badan. Baro sida loo diyaariyo oo aad ilmahaagu uga caawiso dhex this isbedel weyn. Akhri wax dheeraad ah
Going to College: My Journey ka Refugee a to College Graduate aGoing to College: Hassan, qaxooti ka yimid Soomaaliya, qoray oo ku saabsan wixii uu soo maray socday college ee USA iyo waxay bixisaa talo si ay u caawiyaan qaxootiga kale ku guuleystaan.
Qof kasta Dream karaa iyo Wax walba waa macquulka ahA Qaxootiga ee Version of Dream Maraykanka. Sheekada A ee sida qaxooti xaqiijinta yimid in qof kasta ku riyoon karo iyo wax kasta oo suurto gal ah.
5 Waxyaabaha si caawi inaad Liibaantaane ee Dugsiyada Maraykanka5 Waxyaabaha si caawi inaad Liibaantaane ee Dugsiyada Maraykanka. Sida American cusub, aad ku riyoon ee xorriyadda, waxbarashada, fursado aan dhamaadka lahayn, iyo guul.